War Deg Deg ah :Beesha Ciise Maxamuud oo warkii ugu cuslaa kasoo saartay madaxweyne Gaas & Faroole oo meel aan laga fileyn…. - Xigasho.net | Xigasho.net
War Deg Deg ah :Beesha Ciise Maxamuud oo warkii ugu cuslaa kasoo saartay madaxweyne Gaas & Faroole oo meel aan laga fileyn….
Xili muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka socdeen gudaha magaalada Garoowe ee caasimada Puntland shirar iyo kulamo u dhaxeeya siyaasiyiinta iyo waxgaradka Beesha Ciise Maxamuud oo kamid ah Beelaha Puntland ayaa waxaa faah faahino kasoo baxayaan shirarkaas iyo kulamadaasi.
Hadaba shirarkani oo looga hadlayey qaabkii Beesha Ciise Maxamuud ay u muujin lahayd taageerada ay u hayso madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas oo ay ku sheegeen hogaamiyihii ugu wax qabadka badnaa Puntland ayey soo jeediyeen in muddo labo sano ah loogu daro xilka madaxtinimada Puntland sababo la xiriira dhamaystirka hawlaha hor yaala iyo hirgelinta mashaariicda qabyada ah ee gobolka Nugaal haatan ka socota.
Siyaasiyiinta Beesha Ciise Maxamuud ayaa soo jeediyey in Baarlamaanka Puntland ay hor geeyeen xildhibaanada Puntland ee kasoo jeeda Beeshani mooshin xilka loogu kor dhinayo madaxweyne Gaas, waxaana aanan la ogeyn qaabka uu ku hiri geli doono qorshahaasi.
Dhanka kale madaxweynihii hore ee Puntland Dr. C/raxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole ayaa isna dhankiisa kawada qorshe ah sidii uu u soo saari lahaa musharaxiisa uu la rabo in uu hanaanka u qabto talada Puntland,
waxaana sii xoogaysanaya xiisadaha ka dhex aloosan madaxweyne Gaas iyo xildhibaan Faroole maadaama lagu wada dagaalamayo kursiga madaxtimada Puntland oo mid walbaaba dhankiisa kawado qorshe halis ku ah kan kale.
Sanadka 2019 ayaa waxaa ka dhici doona Puntland doorashada madaxtinimada taas oo ay ku loolami doonaan musharaxiin aad u badan,
waxaana xusid mudan in madaxweynaha Puntland ee haatan Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas uu qorshaynayo sidii uu u sii dheeraysan lahaa muddada ka harsan xilkiisa halka Beelaha Puntland qaarkood ay ku taageereen arintaasi.